ထောက်ကြံ့ပင် - ဝီကီပီးဒီးယား
ထောက်ကြံ့ပင်ကို မြန်မာနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိ သစ်တောများ၌ တွေ့ရသည်။ ရုက္ခဗေဒ အလိုအားဖြင့် 'တာမီနဲလီးယား တိုမင်တိုဆာ (Terminalia tomentosa = T. coriacea)' ဟုခေါ်၍၊ ဖန်ခါးပင်၊ သန်ပင်၊ လိမ်ပင်၊ ရုံးပင်တို့နှင့်အတူ 'ကွန်ဗရီတေးစီအီး (Combretaceae)' မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်လေသည်။ မျိုးကွဲများမှာ ထောက်ကြံ့ရွက်သေး၊ ထောက်ကြံ့ရွက်ရှည် ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
ထောက်ကြံပင်သည် အထူးပင်ကြီးမားသော အပင်မျိုးဖြစ်၏။ အခေါက်မှာ ကြမ်းတမ်း၍ အရောင်မည်း၏။ ကျွန်းပင်၊ ပျဉ်းကတိုးပင်များနှင့်အတူ မြေညီသစ်တောများ၌လည်းကောင်း၊ တောင်ပေါ် သစ်တောများ၌ လည်းကောင်း ပေါက်ရောက်သည်။ ပင်လယ်မျက်နှာပြင်မှ အထက်အမြင့်ပေ ၂၅ဝဝ အထိ ထောက်ကြံ့ပင်များကို တွေ့ရသည်။ သစ်သားမှာ ညိုပုပ်ပုပ်အရောင်ရှိ၍၊ အစင်းကြောင်းများပါရှိ၏။ ကောင်း စွာရွေပေါ်ထိုး၍ ပါလစ်အရောင်တင်ပေးလျှင် အလွန်လှပသည်။ အိမ်ထောင်ပရိဘောဂပြုလုပ်ရာ၌ သုံးနိုင်၏။
ဂရုတစိုက် ပြုပြင်၍သုံးလျှင် တာရှည်ခံသောာ သစ်သားမျိုးဖြစ်သည်။ ထောက်ကြံ့သားသည် လျင်မြန်စွာ ခြောက်သွေ့သွားလျှင် ကွဲအက်တတ်သဖြင့်၊ ယင်းကိုအသားသေစေရန် စီမံရာ၌ အထူးပင် ဂရုစိုက်ရ၏။ ထောက်ကြံ့သားကို မီးရထား ဇလီဖားတုံး၊ လှည်း၊ လှေ၊ သင်္ဘောနှင့် အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ရာ၌ အသုံးပြုကြသည်။ ထောက်ကြံ့သားအစိုသည်။ ကုဗပေ တစ်ပေလျှင် အလေးချိန်ပေါင် ၇ဝစီး ၍၊ အခြောက်သည် ပေါင် ၆ဝစီးသည်။
ထောက်ကြံ့သားသည် သစ်မာသားမျိုးဖြစ်သဖြင့် ထင်းအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်၏။ ထိုပြင် ထောက်ကြံ့သားကို မီးဖုတ်၍ရသော မီးသွေးသည် ပထမတန်းစားမီးသွေးဖြစ်၏။ ထောက်ကြံ့ပင်၏ အခေါက်ထဲ၌ 'တင်နင်'ခေါ် ချုပ်ဆေးသတ္တိရှိသော ဓာတုဗေဒ ပစ္စည်းတမျိုးပါရှိရာ၊ သားရေနယ်လုပ်ငန်း၌ ထောက်ကြံ့သစ်ခေါက်များကို အခေါက်လိုက်ပင်ထည့်၍ သုံးလေ့ရှိကြ၏။ ဝမ်းသက်လျှင်လည်း ထောက်ကြံ့ခေါက်ကို ဆေးအဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ ပိုးချည်အတွက် ပိုးမွေးမြူရာ၌ ထောက်ကြံ့ခေါက်ရွက်များကိုလည်း ပိုးစာရွက်ကဲ့သို့ သုံးနိုင်သည်ဟု ဆို၏။
↑ Hassler, M. (2019). World Plants: Synonymic Checklists of the Vascular Plants of the World (version Nov 2018). In: Species 2000 & ITIS Catalogue of Life, 2019 Annual Checklist (Roskov Y., Ower G., Orrell T., Nicolson D., Bailly N., Kirk P.M., Bourgoin T., DeWalt R.E., Decock W., Nieukerken E. van, Zarucchi J., Penev L., eds.). Digital resource at http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2019. Species 2000: Naturalis, Leiden, the Netherlands. ISSN 2405-884X.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ထောက်ကြံ့ပင်&oldid=526975" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဇူလိုင် ၂၀၂၀၊ ၁၁:၅၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။